FANOKAFANA NY FAMPIELEZAN-KEVITRA : Nafana ny hetsika ho an’ny andro voalohany
Omaly maraina tamin’ny 6 ora no nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra. 9 octobre 2018
Ho an’ny andro voalohany dia nafana tanteraka ny hetsika nokarakarain’ ireo kandidà. Ao anatin’ ny iray volana no hivalampatra hitety an’i Madagasikara izy ireo, handresy lahatra sy hampahafantatra ny vinan’asany amin’ny vahoaka Malagasy.
Ho an’ny kandidà Andry Nirina Rajoelina, laharana faha-13 ao anatin’ ny biletà tokana dia niavaka ny fanombohan’ny fampielezan-keviny. Natombony avy hatrany tany amin’ny tendrony avaratr’i Madagasikara ny hetsika ho amin’ny fampi-elezan-keviny. Omaly hariva manodidina ny tamin’ny 4 ora no niha-ona mivantana tamin’ny vahoaka tany an-toerana ny tenany. Namelabelatra ny vinan’asam-pampandrosoany ho an’i Madagasikara izy, ary nifanome toky tamin’ny vahoakan’i Diego. Ho an’iny andro voalohany iny dia samy nirotsaka an-tsehatra nidina ifotony ho hitam-bahoaka avokoa ireo kandidà raha ho an’ny teto an-drenivohitra manokana.
Ny kandidà Ratsiraka, ohatra, dia tetsy Antanimenabe Antananarivo no namory olona izy niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy. Ho an’ny kandidà Rabarihoela Bruno kosa indray dia nosantariny tamin’ny fitetezana ireo boriborintany miisa enina teto Antananarivo ny fampielezan-keviny raha nialohavan’ny fotoam-pivavahana izany ho an’ny andron’ny alahady. Ny kandidà Ravalomanana kosa dia nanomboka ny fampielezan-keviny teny amin’ny foiben-toeany ny fampielezan-keviny tetsy Ampandrana ary narahina diabe mamakivaky an’Analakely sy Ambohijatovo izany ny antoandro.
Kandidà miisa 22 kosa no indray nanao hetsika teny amin’ny kianjan’ Ambohijatovo. Nafana ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra omaly, tsy hita noanoa ny fitohanan’ny fiarakodia nateraky ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra. Anisany tena nampimenomenona ny mponin’Itaosy ny hetsika nataon’ny kandidà Hery Rajaonari-mampianina tetsy Antanikatsaka izay niteraka fitohanana naharitra ora maro. Amin’ny ankapobeny dia nilamina ny fanatantrehan’ ireo kandidà ny fampielezan-kevitra ho an’ny andro voalohany omaly.